Tontolo Arabo: Arahabaina i Tonizia! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Desambra 2011 10:11 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, বাংলা, Swahili, Ελληνικά, polski, English
Ilay mpitolona ho an'ny zon'olombelona, Moncef Marzoiki, 66 taona, no voafidy ho filoha vonjimaika hitantana an'i Tonizia nanomboka ny 13 desambra. Mpanohitra izy ary nogadraina sy natao sesintany nandritra ny fitondran'ny filoha teo aloha Zeine El Abidine Ben Ali, hitondra an'i Tonizia izy mandram-pandrafitra ny lalàm-panorenana vaovao, sy ny fifidianana antenimieram-pirenena sy filoham-pirenena.
Niteraka fanehoan-kevitra teo amin'ny olom-pirenena ny fanendrena azy, mizara ny hevitra, ao ny mitsikera, ao koa ny mankasitraka. Manerana ny tontolo Arabo, ny fanendrena an'i Marzouki, izay narahan'ny kabary fankasitrahana, dia nomarihan'ny olom-pirenena maro, izay manantena ny fiovan'i Tonizia eo amin'ny lafiny demokrasia, fitoviana, zon'olombelona sy politika, ekonomika ary fiovana eo amin'ny lalàna.
Indreto santionany amin'ireo fanehoan-kevitra nataon'ny Arabo tao amin'ny twitter.
Manofy i Noon Arabia Yemenita:
@NoonArabia: Iriko raha aty Yemen indray andro any no mba afaka hirehareha izahay satria olona “nofidianay” no hitondra anay, tahaka ny miseho any Tonizia ankehitriny. #Yemen #Tunisia
Tovolahy Yemenita iray hafa Abubakr Al Shamahi namorona rohy amin'ny kabarin'i Marzouki tao amin'ny parlemanta toniziana ary mizara ny nofiny koa:
@abubakrabdullah: Mahavariana – ny kabarin'i Marzouki tao amin'ny parlemanta toniziana androany – Maniry ny hisian'ny mitovy amin'ireny aty Yemen aho indray andro any..
Nandritra ny lanonana nanaovany fianianana, nitomany i Marzouki raha nahatsiaro ireo maritiora rehetra nandritra ny revolisiona.
Ilay mpanao gazety Andrew Hammond mitantara:
@Hammonda1: #nitomany ny filoha Marzouki raha nahatsiaro ireo maritiora tamin'ny revolisiona; nilaza ireo tolona mbola iainan'ny Palestiniana, Siriana ary Yemenita.
Mikasika izay, naneho hevitra ilay Ejipsiana Menna Alaa [ar]:
@TheMiinz: Tsy Toniziana ny Ejipsiana satria tsy ho hitanao mihitsy sanatria ny manamboninahitra handatsaka ny ranomasony ho an'ireo maritiora. Ary tsy ho hitanao mihitsy ny mpikambana ao amin'ny parlemanta hiaraka hitsangana ka hihira hoe: “Raha te ho velona ny vahoaka, ny ho avy no hamaly azy.”
Andininy ao amin'ny hiram-pirenena Toniziana izany hira izany. Azonao jerena eto ny andininy rehetra amin'izany hiram-pirenena izany.
Egyptocracy miombon-kevitra amin'izay:
@Egyptocracy: Kabary nahavariana nataon'i Al Moncef Marzouki#Marzouki. Arahabaina i Tonizia #Tunisia. Manome fanantenana anay ianareo. #Egypt
Ary ilay Ejiptiana Abdelrahman Ayyash malahelo:
@3yyash: Nanao revolisiona i Tonizia, ny azy tena izy fa ny antsika hosoka #maha-te-haka tahaka #Tunisia #Egypt #Jan25
Azo arahanao ao amin'ny www.moncefmarzouki.com ny bilaogin'i Marzouki ary ny tweets ao amin'ny @Moncef_Marzouki.